Nataon'i Sina tamin'ny Internet ny The Canton Fair tamin'ny volana Jona | Shoufan Metal
Ny praiminisitra Li Keqiang dia nitazona ny fivorian'ny mpanatanteraka tao amin'ny filankevi-panjakana tamin'ny 7 aprily, ho valin'ny toe-javatra lehibe niseho tamin'ny valanaretina manerantany, nanapa-kevitra ny fivoriana fa hatao amin'ny Internet amin'ny antsasaky ny faran'ny volana jona ny foara faha-Canton faha-127. Ny Canton Fair dia iray amin'ireo foara voalohany lasa tia tontolo iainana any Shina ary misy vokany ny ezaka maitso ataony.
Ny fampiharana ny Canton Fair maintso dia tsy vitan'ny hoe mampiroborobo ny fitomboany maharitra, fa manome traikefa amin'ny fampandrosoana maitso ho an'ny indostrian'ny fampirantiana ao Shina, hoy ny mpikarakara.
Ny foara, izay atao matetika any Guangzhou indroa isan-taona ao an-drenivohitry ny faritanin'i Guangdong South China, dia atao an-tserasera manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 24 Jona, noho ny areti-mifindra coronavirus. Nandritra ny 60 taona mahery ny fampandrosoana, ny foara dia nitombo ho iray amin'ireo fampirantiana lehibe indrindra hampiroboroboana ny fampandrosoana toekarena misokatra.
Ny China Foreign Trade Center, mpikarakara ny foara, dia nanao ezaka hizahana làlana fampandrosoana maitso ho an'ny fampiantranoana ara-drariny.
Ity dia fomba vaovao ho an'ny Canton Fair.
Fa ho anay, ahoana no ahafantaranao bebe kokoa momba anay, ny resaka video no fomba tsara indrindra.
Azoko aseho anao ny orinasanay amin'ny alàlan'ny horonantsary, ny tsipika famokarana, ny birao ary ny trano fanatobiana entana.
Fitsangatsanganana mivantana amin'ny orinasanay, izay hanampy anao hahafantatra tanteraka ny orinasanay sy ny serivisinay.
Amin'ity fotoana manokana ity dia manantena izahay fa hanome anao fahatsapana vaovao momba anay ny serivisinay amin'ny Internet.
Ahoana ny fomba hahazoana ny katalaoginao? Azonao atao ny mifandray amiko amin'ireo làlana eto ambanin'ny tranokalanay.
Ahoana ny fametrahana baiko? Azonao atao ny manamarina ny FAQ anay.
Ahoana ny fomba fangatahana fampirantiana amin'ny kanto amin'ny Internet? Mbola tsy namoaka ny vaovao ny birao foibe canton, vao mahazo ny vaovao isika dia hanavao.
Ahoana ny fomba hiarovanao tena tsy ho voan'ny coronavirus vaovao? Azonao atao ny manamarina an'io.
MIANDRAIKITSIKA AZA ATAO MIADIKA SY HITANAO ANAO AMIN'NY TAON'NY CANTON FAIR.